Jidda - Wikipedia
Jeddah (Carabiga: جدة) waa magaalo kamida magaalooyinka uguwaawayn wadanka Sucuudiga waxa ay kutaalaa bada cas.
Saudi Arabia Jeddah (Jeddah) Jiddada Jiddada Jidka, Hejazi: [d͡ʒɪd.da]) waa magaalo ku taalla Hijaz Tihamah ee ku taal xeebta Badda Cas, waana magaala weyn ee galbeedka Sacuudi Carabiya. Waa magaalo weyn oo ku taal Makkah, oo ah dekedda ugu weyn ee Badda Cas, iyo dad ku dhawaad ​​afar milyan oo qof (ilaa 2017), magaalada labaad ee ugu weyn Saudi Arabia ka dib caasimadda, Riyadh. Jeddah waa caasimadda ganacsiga Saudi Arabia. 
Jeddah waa albaabka koowaad ee Mecca iyo Madiina, laba ka mid ah magaalooyinka ugu muhimsan ee Islaamka iyo meelaha soo jiidashada caanka ah.
Dhaqaale ahaan, Jeddah wuxuu diiradda saarayaa sidii loo horumarin lahaa maalgashi raasumaal ah oo ku saabsan hoggaanka sayniska iyo injineernimada gudaha Sacuudi Carabiya iyo Bariga Dhexe.  Jeddah waxay si madax-bannaani ah kaalinta afraad ugu gashay Afrika - Gobollada Bariga Dhexe marka la eego naqshadaynta sannadkii 2009-kii gudaha magaalooyinka Innovation Industries Index. 
Jeddah waa mid ka mid ah magaalooyinka Sacuudi Carabiya, waxaana loo magacaabay Magaaladda Beta Caalamka ee Globalization iyo Kooxaha Daraasaadka Cities ee Aduunka iyo Shabakadda (GaWC). Marka la eego magaalada ku dhow dhow Badda Cas, kalluumeysiga iyo badeecada badda waxay ku sarreysaa dhaqanka cunnada ee ka duwan qaybaha kale ee dalka. Carabiga, waa qasbada magaalada waa "Jeddah Ghair," oo u turjumaya "Jeddah way ka duwan tahay." Dhaqdhaqaaqa ayaa si weyn loogu dhex adeegsaday dadka gudaha iyo sidoo kale martida ajnabiga ah. Magaaladii hore waxaa loo aqoonsaday inay tahay "magaalada ugu furan" magaalada Saudi Arabia.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jidda&oldid=190298"
Last edited on 30 Jannaayo 2019, at 15:29
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Jannaayo 2019, marka ee eheed 15:29.